/ Imikhiqizo / I-Nootropics powder / I-Alpha GPC powder
Isilinganiselwa: SKU: 28319-77-9. Isigaba: I-Nootropics powder
I-AASraw inokukwazi ukuhlanganisa nokukhiqiza kusuka kugremu kuya ku-oda olukhulu lwe-Alpha GPC powder (i-28319-77-9), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi elandelwayo.
I-Alpha GPC powder, eyaziwa nangokuthi i-L-Alpha glycerylphosphorylcholine noma i-choline alfoscerate, iyi-nootropic yemvelo esebenza yodwa futhi ihlangene namanye ama-nootropics. Ngokwemvelo ikhona emzimbeni ngamanani amancane futhi yenziwa ngokokuhweba njengesithako se-lecithin yesoya ehlanziwe…
I-Alpha GPC ividiyo ye-powder
Alpha GPC powder Abalingiswa basisekelo
Igama: I-Alpha GPC powder
Ifomula Yamamolekhula: C8H20NO6P
Isisindo Yamamolekhula: 257.22
I-Melt Point: I-142.5-143 °
I-Alpha GPC powder ekusebenzeni umsebenzi wobuchopho futhi umjikelezo owengeziwe wokuthuthukisa
I-Raw Alpha GPC powder, i-L-Alpha glycerylphosphorylcholine, i-choline alfoscerate
Ephakathi kwe-phospholipid metabolism, i-Raw Alpha GPC powder isebenza ngokushesha futhi inokwethenjelwa, ngokuyinhloko ngokuletha i-choline ebalulekile ebuchosheni.
I-Alpha GPC i-powder inezici eziphawulekayo ze-nootropic, kufaka phakathi ukuthuthukiswa komemori nokuvikela ekugugeni kobuchopho. Ukuhlolwa okukhulu kwemitholampilo okubandakanya izinkulungwane zabahlanganyeli kubonise ukuthi kuyinkinga ephumelelayo yokulahlekelwa imemori ehlobene neminyaka ehambisana nezinkinga ezihlukahlukene, kuhlanganise nesifo se-Alzheimer, ukuwohloka kwengqondo komzimba, nokushaya kwesisu. Ibuye inekhono lokulwa nokuguga neuroprotective kanye nezifundo ziphakamisa ukuthi zingasiza futhi ekwelapheni ukukhathazeka.
Inezinzuzo ezingekho ze-nootropic, kuhlanganise nekhono lokukhulisa impilo ye-membrane yeseli futhi ikhuthaze ukutakula ngokushesha emva kokusebenza komzimba. Ucwaningo lwesandulela lukhombisa ukuthi lungase lusebenze njenge-dopaminergic, okugqugquzela ukukhululwa kwe-hormone dopamine, okusho ukuthi kungase kube yindlela yokwelapha yezimo ezingenasifo esibucayi ezifana nesifo sikaParkinson futhi ingaba nesithuthukisi sengqondo.
Kodwa kubasebenzisi abaningi be-nootropic, amandla angempela we-Alpha GPC powder asezintweni zalo ezikhona lapho kuthathwa ngokuhlanganiswa nezinye izithako. I-choline eyengeziwe ebizwa ngokuthi i-Raw Alpha GPC powder eyenza ukuthi itholakale ebuchosheni ingakwazi ukukhulisa kakhulu imiphumela yokuthuthukiswa kwengqondo yezinhlanga. Kungabuye kuvimbele ikhanda elincanyana kepha elicasulayo eliyingxenye yemiphumela emibi embalwa ehambisana nama-nootropics e-racetam.
I-Alpha GPC powder ilawulwa eYurophu, lapho kunqunywe khona ukwelashwa kwesifo se-Alzheimer futhi ithengiswe ngaphansi kwegama lomkhiqizo iGliatilin no-Delecit. E-US kubhekwa njengesithasiselo sokudla futhi siyatholakala ngaphandle kwemithi.
Umthamo ojwayelekile we-alpha-GPC yi-300-600 mg, ngokusho kwamanani ejwayelekile welebuli. Leli dozi lihambisana nokucwaninga usebenzisa i-alpha-GPC ukukhulisa amandla okukhipha (600 mg) kanye nezifundo ezimbili eziphawula ukukhushulwa kokuvinjwa kwe-hormone yokukhula, futhi kungenzeka ukuthi umthamo omuhle ukuthatha abagijimi.
Ukuze kusetshenziswe i-alpha-GPC ekuvimbeleni izimpawu zokuncipha kwengqondo, cishe zonke izifundo zisebenzisa umthamo we-1,200 mg nsuku zonke, zihlukaniswe ngezilinganiso ezintathu ze-400 mg. Akuqinisekiseki ukuthi ukulinganisa okuphansi kuzokuzuzisa kanjani ukuqonda, kepha i-1,200 mg ibonakala ihambisana njalo nenzuzo.
Ucwaningo lwezilinganiso lisikisela ukuthi imiphumela ye-alpha-GPC yokungenisa komlomo ngomlomo ku-300-600 mg / kg, okungumthamo womuntu olinganisiwe we-48-96 mg / kg (nangomuntu we-150lb, 3,272-6,545 mg nsuku zonke).
Isexwayiso ku-Alpha GPC powder
Naphezu kokuba umthombo wemvelo we-nutrient choline, ukugcwalisa kwifomu egxile kungabangela imiphumela emibi ye-Alpha GPC. Omunye wemiphumela emibi ye-Alpha GPC ye-powder yi-headache noma isizungu, ngokuvamile esivela ekukhiqizeni izinto eziningi ebuchosheni. Abanye abantu, njenge-"biohacker" ethandwayo uDave Asprey, bathi bakude kakhulu kanti kanjalo banamahloni lapho behlola ngaphezulu.
Ezinye imiphumela emibi ye-Raw Alpha GPC powder zihlanganisa izinto ezinjengokudideka, i-erythema, nokuntula ukulala (kusukela ekuvuseleleni). Kodwa-ke, naphezu kwamathuba emiphumela emibi, kukhona ubufakazi bokuthi le nootropic ibekezeleleke kahle kumazinga aphezulu. I-LD50 (isilinganiso esetshenziselwa ukubona ukuthi imingcele ibulala i-50% yabantu) ikhombisa umthamo we-10k mg / kg (okulingana nama-6800 amagremu womuntu we-150 lb) ngamagundane.
Ucwaningo olunengqondo olwengeziwe lubonise ukuthi "akukho okubonile izinga elibi lomthelela" ngesilinganiso esilingana ne-1636 mg kumuntu we-150 lb.
Nakuba ngokuvamile eyaziwa ngokuthi ingabonakali, abanye abantu bayabika ukugqugquzelwa kwengqondo nge-alpha-GPC eyengeziwe.
Kungase kube ukuhlakanipha ukuthatha i-alpha-GPC eceleni kwamafutha e-fatty edlayo ekumamiseni (ngenxa yokuthi i-phospholipid), nakuba lokhu kungabonakali isidingo esiphelele.
I-alpha-glycerylphosphorylcholine (efinyelelwe ku-Alpha-GPC ngokuvamile, eyaziwa nangokuthi i-choline alphoscerate noma i-glycerophosphocholine) i-choline equkethe i-phospholipid futhi iphakathi kwe-lecithin metabolism noma nje i-molecule ye-lecithin nama-acids amabili angaphansi. , futhi uyaziwa ukuthi uyandulela i-acetylcholine ne-phosphatidylcholine emzimbeni ngemuva kokungenisa.
I-Alpha-GPC itholakala njengento eyenziwa ngokwemvelo yemikhiqizo enyama ebomvu nezicubu zomzimba kodwa ingxenye enkulu ayitholakali ngokwemvelo emithonjeni engokwemvelo. Izithako eziningi eziqukethe i-Alpha-GPC zenziwe ngokwenziwa, lapho zingadalwa nge-enzymatic kusuka eqanda noma i-lecithin ye-soy. Ngenxa yalesi synthesis kanye nomthombo, ngezinye izikhathi kuthiwa yi-derived semisynthetic ye-lecithin.
I-Alpha GPC i-powder ingakwazi ukwandisa ngokushesha ukuhlanganiswa kwe-acetylcholine kanye neurotransmission ebuchosheni, okungukuthi imizuzu engu-20-30 ngemuva kokusetshenziswa komlomo. Abasebenzisi bangalindela ukukhuphuka kokuqapha kwengqondo, ukugxilongwa nokugxila kwengqondo phakathi nalesi sikhathi. Ukusetshenziswa okuhambisanayo ngokuhambisana nokudla okunengqondo nokuzivocavoca kuzothola ukusebenza okugcwele nemiphumela yokuthuthukiswa kwengqondo ye Raw Alpha GPC powder ngaphakathi kwamasonto wokuqala okusetshenziswa kwe-2.
I-Alpha GPC Powder Raw
I-Alpha GPC Marketing powder
Indlela yokuthenga i-Alpha GPC powder kusuka ku-AASraw